Yakarasika Masokisi: Naughty Hama, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Yakarasika Masokisi: Naughty Hama, Yemahara kune Yakaganhurirwa Nguva
Isu tinodzokera kumutoro kuti tikuratidzei mutambo mutsva uyo unowanikwa kurodha mahara kwenguva pfupi. Nhasi tiri kutaura nezve Akarasika Masokisi: Naughty Hama, mutambo watinozova nawo nguva dzakanaka kwazvo. Yakarasika Masokisi :: Naughty Hama mutambo unonakidza we run'n'gun une nhanho dzinopfuura makumi matatu nenhamba huru yevatambi, mabhonasi, zvipingaidzo, nzvimbo… uko kwatinozoravira kuravira kwechokwadi kwehugamba. Yakarasika Sokisi ine mutengo wenguva dzose muApp Store ye4,99 euros, asi kwenguva yakati rebei tinogona kurodhaunira mahara kuburikidza neiyi link yawakasiya kumagumo kwechinyorwa Izvo zvakare haina kupa chero mhando ye-in-app kutenga.
Asi hazvisi zvese zvine mutsindo nemutambo uyu, sezvo zvisingawirirane neyese iPhone mamodheru, zvakadaro hongu, iri neApple TV.
1 Midziyo isingaenderane neLost Rocks: Naughty Hama
2 Yakarasika Masokisi: Naughty Hama Zvimiro
Midziyo isingaenderane neLost Rocks: Naughty Hama
iPod 3rd chizvarwa
iPod 4rd chizvarwa
iPod 5rd chizvarwa
Akarasika Matombo: Naughty Hama dzinotsigira vatyairi veMFI, izvo zvinotibvumidza isu kuti tinakidzwe zvizere neruzivo rwekutamba rwunotipa. Zvinoda zvirinani iOS 7 kana kuti gare gare kuti zvishande uye zvinowiriranawo neApple TV, iine iPhone, iPad uye iPod touch izvo zvisiri mune zvakanyorwa pamusoro. Kuti unakirwe neakarasika Masokisi, isu tichave tichida zvishoma zvishoma pane 1 GB yemahara nzvimbo pane yedu kifaa
Yakarasika Masokisi: Naughty Hama Zvimiro
Akasiyana kwazvo mutambo wemakanika. Mutambi anogona kupedzisa chero dambudziko nenzira yake.
Misheni uye matambudziko anozorarama zvinoenderana nezvinotarisirwa nevatambi vanonyanya kuda.
Mhando nhatu dzenzvimbo dzine akasiyana akasiyana dhizaini, marongero uye nhanho dzekuomarara.
Kupfuura 30 nhanho dzekunakidzwa.
Iko hakuna mukati me-app kutenga!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Yakarasika Masokisi: Naughty Hama, Yemahara kune Yakaganhurirwa Nguva
Zvakanaka dzoka kune iyi yemahara panguva ino.
Apple ichawedzera kuyambuka njanji kune yayo yepamutemo Mepu